RISC-V: yakanyanyisa tekinoroji uye yakavhurika sosi yekuongorora Venus | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe mamangwana emamishinari eNASA nemamwe masangano akakosha achitarisa pakudzosa munhu kuMwedzi uye kukunda Mars, kuchine zvakawanda zvekudzidza kubva Venus, muvakidzani wedu wepedyo. Nyika ino ine kufanana kukuru kune Nyika, sezvo yaimbove yakafanana nayo, kunyangwe ichipisa zvakanyanya nhasi.
Neichi chikonzero, mamwe mapurojekiti anotarisira kuti aongorore nzvimbo yayo mukutsvaga imwe data. Asi pane izvo iwe unoda tekinoroji inokwanisa kuramba tembiricha iri pamusoro pe470ºC. Iko hakuna akawanda masystem emagetsi anotsigira izvo, saka iwo anofanirwa kuve akakosha kwazvo. Kamwe zvakare, yakavhurwa sosi inotora yepakati nhanho dzokorora.
Ozark Yakabatanidzwa Matunhu inyanzvi mukugadzira tekinoroji yenzvimbo dzakanyanyisa idzi, uye yakasarudzwa pakati pezvikumbiro zvakadzidzwa neNASA pachinangwa ichi.
Uye chii chine zvese zvine chekuita neakavhurwa sosi kana mapurojekiti anofarira iyi blog? Zvakanaka, inofanirwa kuita nekuti iri kushanda pane 3D nScrypt yekugadzira sisitimu yekugadzira emagetsi masisitimu anoshanda pane dzakanyanya tembiricha, uye zvinoenderana ne ISA RISC-V, pasi pemuraira weLinux Foundation.
Esa tekinoroji yaizobvumidza kushanda kwenguva yakareba pamusoro peVenus pasina kupisa. Vachagadzira akati wandei RISC-V machipisi anotsigira 500ºC, yakati rebei kupfuura chairo kuitira kuti vagare kwenguva refu. Inokosha pakushanda kwemotokari yerobhoti iyo ichave iri pamusoro pekushanya nekuongorora nharaunda kwayakaiswa. Uye zvakare, inogona zvakare kushandiswa kune zvimwe zvinhu, senge maroketi ayo anofambisa basa uye zvimwe zvinoshandiswa nesainzi zvemamiriro akaipisisa ...
Zvakare, iyo kernel iyo RISC-V inotsigira izvozvi iri LinuxSaka ndine chokwadi chekuti pachave nezvakawanda zvakavhurika sosi munzvimbo dzenzvimbo. Kunyanya kunyangwe ikozvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » RISC-V: yakanyanyisa tekinoroji uye yakavhurika sosi yekuongorora Venus